राई बोर्डले भ्रष्टाचार नभएको प्रमाणित गरे म जस्तै दण्ड पनि भोग्न तयार छु, तर प्रमाणित नगरे? - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनराई बोर्डले भ्रष्टाचार नभएको प्रमाणित गरे म जस्तै दण्ड पनि भोग्न तयार छु, तर प्रमाणित नगरे?
राई बोर्डले भ्रष्टाचार नभएको प्रमाणित गरे म जस्तै दण्ड पनि भोग्न तयार छु, तर प्रमाणित नगरे?
June 16, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन, शब्द 0
क्यामुलस राई, जलढका तोदे
गोरूबथान ब्लक रोङ्गो डाभ गाउँ भस्मे शाखा सचिवले राई बोर्डमा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्टिकरण दिँदै मलाई व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर बोर्ड र समुदायलाई बदनाम गर्ने कोशिष र बोर्डलाई लाञ्छना लगाएर झुटो खबर फैलाएको भन्दै (मेरो नाम नलिई) जुन आधारहिन आरोप लगाएको छ, त्यसको म घोर भर्त्सना जनाउँछु।
स्वार्थ राखेर बोर्ड र समुदायलाई लुटेर जातिको बद्नाम गर्ने कोशिष कसले गर्दैछ? त्यसको निम्ति पत्रकारहरूलाई निम्ताएर दार्जीलिङ पहाड़को कुनै पनि ठाउँमा जहिले पनि खुल्ला तर्क (डिबेट) गर्ने म चुनौति दिन्छु।
घर बनिसकेको दुइ बर्ष बित्न लाग्दा पनि बनाउने खर्च नदिनु भनेको सरासर समुदायलाई लुट्ने कोशिष गर्नु हो। या बनाउने खर्च किस्तीमा दिने गरेको बताएको छ, जब लाभार्थीको नाममा लाखौं रूपियाँको चेकमा साइन भएपछि यहाँ किस्तिको कुरा कहाँबाट आयो?
बर्षौ दिनसम्म लाभार्थीको पैसा अड्काएर त्यसको सुद कसले खाँदैछ? उक्त कुराको पनि खुलासा हुनु पर्छ। क्षेत्रीय पदाधिकारीले सम्बन्धित कार्यालय र आपूर्तिकर्ताबाट 45 हजार लिने गरेकोछ। त्यसको प्रमाण मसँग छ।
उनीहरूले 45 हजार थापेर, लाभार्थीलाई चाहिँ केही रकम मात्र थमाएर अरू रकम लुट्ने प्रयास गरिएको छ। लाभार्थीलाई दिने पैसा सोझै नदिएर आफुसित राख्नु भनेको नै सरासर गैरजिम्मेवारी कदम हो। र त्यसको झट्ट माथिल्लो तहबाट जाँच हुनुपर्छ।
सरल र सोझो लाभार्थीहरूलाई एउटा आरोप पनि छ, ‘बनाउने पैसा एकै चोटि दिए लाभार्थीले पैसा दुरुपयोग गर्छन्’ भन्ने। तर त्यो सरासर गलत धारणा हो। दुरूपयोग त बोर्डले सोझै पैसा नदिएर पो गरिरहेछन्, होइन र?
उनीहरूले त 10 हजार मात्र पाउँदा पनि सुदमा ऋृण काडेर घर पूर्ण गरेका छन्।
व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर उनीहरू आफै नै मनपरि घर बनाउने ठिका लिएर बोर्डको दुई लाखको घरहरू विभागबाट बनिने 75 हजारको गीताञ्जलीको घर जस्तै बनाइरहेका छन्। तर आज मैले प्रत्येक बोर्डको समुदायले आ-आफ्नो बोर्डबाट पाउने हक र अधिकारको बिषयमा बोल्दा मलाई स्वार्थीको लाञ्छना लगाउनु भनेको उनीहरूले आफै धामी आफै नै बोक्सीको परिचय आफैलाई दिनु हो। जुन कुराको म घोर आपत्ति जनाउँछु।
रोङ्गो डाभ गाउँ भस्मे शाखा सचिवले कसैको ईसारामा बोर्डमा भ्रष्टाचार नभएको सपष्टिकरण दिँदैछन्। तर म भन्छु बोर्डमा मटेरियल र बनाउने खर्च जोड़ेर 40 % भ्रष्टाचार भएको छ। यसको प्रमाण मसित छ। आवश्यक परे सार्वजनिक गरौंला।
सचिवले राई बोर्डमा भ्रष्टाचार नभएको प्रमाणित गर्न सके म जस्तै दण्ड पनि भोग्न तयार छु। प्रमाणित गर्न सकेनन् भने गोरूबथान ब्लक मात्रै नभएर सिङ्गो पहाड़, तराई र डुवर्सका अघिका लाभार्थीले जम्मा दुई लाखको घर बनेको हुनु पर्छ।
लेबर र मिस्त्री खर्च 45 हजार मात्र होइन तर एक लाख पच्पन्न हजारको घर बनाउने सामाग्री पनि दिएको हुनुपर्छ। एक लाख पच्पन्न हजारको मटेरियलको प्रत्येक सामग्रीको क्यास मेमो पनि अब हामी चाँढै नै आरटीआइ मार्फत जिल्लापाल र सम्बन्धित बोर्डलाई माग गर्नेछौं।
बोर्डले दिएको मटेरियलको ‌‌गुणस्तर र मात्रा लिएर हामीले प्रत्येक सम्बन्धित बिक्रेताहरूसँग जोगा-जोग साथै जँच गर्दा जम्मा अनुमानित रकम 80 हजार मात्र लाग्ने बताइएको छ। अरू पैसा कहाँ जाँदैछ ? यहाँ घर नबनाएर होइन तर बनाएर पो व्यापक भ्रष्टाचार भएको थाहा पायौं। जुन कुरा सिधै जनता माझ राख्दैछौं।
क्षेत्रमा राई बोर्ड बाहेक अन्य केही बोर्डमा पनि त्यतिकै भ्रष्टाचार भएको गुनासो हामी माझ आइरहेको छ। कतिले बनाउने खर्च9हजार, घरको दैलो सादा प्लाईको, सामग्री निम्न स्तरको अनि बनाउने रहल रकम माग्न जाँदा धम्काउने जस्ता कार्य भएको र यस्तो सामाजिक बेथितिको हामी पर्दाफास गर्नेछौँ।
त्यसका तिम्ति हामीले दार्जीलिङ पहाड़को हालैमा छ वटा समुदायबाट 48 जना युवाहरूको टोली ठाउँ ‌-ठाउँवाट बनाएका छौँ। यसको बैठक शीघ्र हुनेछ। अन्य समुदायसग पनि जोगाजोग भइरहेको छ। उनीहरूलाई पनि टोलीमा ल्याउनेछौँ। प्रत्येकले आ-आफ्नो समुदायमा भएको लापर्वाही र भ्रष्टाचारको पर्दाफास र रोकथाम गर्नेछन्।
अन्य केही समुदायमा हेरौं भने लेप्चा बोर्डले घर मात्र होइन सामुदायिक भवनदेखि आफ्नो समुदायलाई शिक्षित र भविष्यमा अधिकारीहरू बनाउनलाई लाखौ करोड़ौ पैसा बोर्ड मार्फत शिक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ तर केही बोर्डले चाहीँ आफ्नो समुदायको निम्ति एउटा राम्रो घर धरि बनाएर दिन सकेको छैन। यो बढो गम्भिर र शरमको कुरो हो।
दुइ साँढेको नब्बे मिनेट र सम्भावना
एच. एस. उत्तीर्णका लागि शिक्षण तालिम अधिसूचना सार्वजनिक